သင့်ဘဝအတွက် ကြွယ်ဝမှုချမ်းသာမှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်မည့် နည်းလမ်း 11 ချက် - ONE DAILY MEDIA
1. ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖြင့် စတင်ပါ။
အမြဲတမ်း ကျေးဇူးတင်မှုဖြင့် စတင်ပါ။ သင့်မှာ ရှိပြီးသားအရာတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ၊ ဒီရိုးရှင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အံ့ဖွယ်အကျိုးတွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
နောက်တစ်ခုက တိုးတက်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိန်ခေါ်ရပါမယ်။ သင့်အတွက် လိုအပ်သည့်အကြံဥာဏ်များ ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်စေရန်အတွက် သင့်စိတ်ကူးများကို မျှဝေနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို အကျိုးအမြတ်နဲ့ ကြွယ်ဝမှုလို့ ခေါ်ပါတယ်။ဒါက သင့်ကိုယ်သင် လိုအပ်တာထက် ပိုတိုးတက်ဖို့ လုပ်ဆောင်တာကို ဆိုလိုပြီး တခြားသူတွေ ၊ မိမိကိုယ်ကို ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ ၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းတို့ကို ကောင်းချီးပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကြွယ်ဝမှုများစတင်လာသည်နှင့် တပြိုင်နက် မယုံနိုင်လောက်အောင် တိုးတက်လာပြီး ကိန်းဂဏာန်းများ တိုးများလာသည်မှာ အံ့သြစရာပင်ဖြစ်ပါတယ်။
အရာရာတိုင်းဟာ စိတ်နဲ့ နှလုံးသားနဲ့ အစပြုပါတယ်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အောင်မြင်မှုတိုင်းသည် လူတစ်ဦး၏စိတ်ဆန္ဒမှ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ပြီး သတ္တိရှိရှိ အိပ်မက်မက်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးဖို့ အချိန်တစ်ခုယူပါ။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စဥ်းစားပါ။ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ တွေးခေါ်မှုတွေကြောင့် သင့်ကို စိတ်ဓာတ်မကျစေပါနဲ့။
“အိပ်မက်သမား” ဖြစ်ချင်သလား ? သင်ကိုယ်တိုင်၊ သင့်မိသားစုနှင့် အခြားသူများအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေများကို အိပ်မက်မက်ပါ။ သင့်မှာ အေးစက်နေတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုရှိခဲ့ရင် အိပ်မက်ကို ပြန်စလိုက်ပါ။ မီးတောက်ကိုအစပြုလိုက်ပါ။ ဘဝက တိုတောင်းလွန်းပါတယ်။
3. သင့်ရဲ့ အတွေးအမြင်ကို ပြောင်းလဲပါ။
ချမ်းသာတဲ့သူတွေဟာ ပေါများတဲ့ကမ္ဘာမှာ နေထိုင်ကြပါတယ်။ ဆင်းရဲသူများကတော့ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်သောကမ္ဘာတွင် နေထိုင်ကြရပါတယ်။
ဆင်းရဲတဲ့သူတွေက ကမ္ဘာမှာ လှည့်ပတ်ဖို့ မလုံလောက်ဘူးလို့ ထင်နေကြပါတယ်။ ၎င်းတို့သဟာ အကြောက်တရားကို အခြေခံသော အတွေးအခေါ်မှ ဆင်းသက်လာကြပါတယ်။ သူတို့၏အဖြေများသည် “တစ်ခုခု/သို့မဟုတ်” ဖြစ်ပြီး “နှစ်ခုလုံး” ဟူ၍ ဘယ်တော့မှ မရှိပါဘူး။ ဆင်းရဲသူတစ်ဦး၏ စိတ်နေစိတ်ထားတွင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာထက် လုံခြုံမှု၊ မိမိကိုယ်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းထက် လုံခြုံမှု ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေထက် ကာကွယ်မှုတို့ကို သာလွန်ဦးစား‌ေပးပါတယ်။
ချမ်းသာသူများမှာမူ တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ သမားရိုးကျမဟုတ်သော စိတ်ဆန္ဒ၊ ပွင့်လင်းသောစိတ်ဆန္ဒတို့ဖြင့် နှစ်ခုစလုံးကို ရရှိနိုင်ကြောင်း နားလည်ကြပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို “နှစ်ခုစလုံး” ကို ရရှိဖို့ စိတ်ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် တစ်ချိန်က သင်မမြင်မိခဲ့တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကို သင်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။
သင်ကရော? သင်ဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတွက်တဲ့သီအိုရီသမား လား ? ဒါမှမဟုတ် အကြောက်တရားကိုအခြေခံတဲ့ တွေးခေါ်သူတစ်ယောက်လား ?
4. ခွန်အားရှိ‌သော လက်တွေ့ဘဝကို တည်ဆောက်ပါ
သင်ဟာ အခု သင့်ရဲ့လက်‌တွေ့ဘဝကို ဖန်တီးနေတာပါ။ဒါပေမယ့် သင်ဖန်တီးနေတဲ့ လက်တွေ့အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လုပ်တာကသာ ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ လက်တွေ့ဘဝဟာ သင်ပြုလုပ်ရမည့်အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုတည်ဆောက်မှုတစ်ခုလို့ သိထားရင်၊ သင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နေတာလို့ သိထားရင် အဲဒါကိုသင့်စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်ပါ။
သင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို ချရေးပါ။ တစ်ဖက်တွင်၊ သင့်အား ခွန်အားဖြစ်စေသော အရာများကို စာရင်းပြုစုပြီးရှေ့သို့ တွန်းပို့ပေးတဲ့သဘောပါပဲ။ သင့်ကို ယုံကြည်မှုပိုရှိစေတဲ့အရာတွေက သင့်ကိုရှေ့ဆက်ဖို့ ရဲရင့်မှုကိုပေးပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင့်အား စိတ်ဓာတ်ကျစေသော သို့မဟုတ် ရှုတ်ချသည့်အရာများကို စာရင်းပြုစုပြီး သင့်ပန်းတိုင်များမှ ဝေးရာသို့ရွှေ့ထားပါ။
သင့်အား ခွန်အားဖြစ်စေသော အရာများကို ယုံကြည်ရန် သင်ရွေးချယ်နိုင်ပြီး သင့်အား နောက်ပြန်ဆုတ်သွားစေမည့်အရာများကို လျစ်လျူရှုရန်လည်း သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ သင့်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုပါ။
5. ဆင်ခြေတွေ‌ပေးတာကို ရပ်လိုက်ပါ။
သင်အနာဂတ်အတွက် ဆင်ခြေများကို ဖယ်ရှားရန် အရေးကြီးပါတယ်။
သင့်အလုပ်ကသင့် အနာဂတ် ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သင်လုပ်နေတဲ့အရာက တော်တော်အရေးကြီးတယ်မဟုတ်လား? သင်အဲဒါကို လက်မလွှတ်ချင်တော့ပါဘူး။ ပြတ်သားရမည့်အရာများစာရင်းနေရှိပါက “သင်၏အနာဂတ်” သည်လည်းမြင့်မားနေမည်ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက သင်ရဲ့ကံကြမ္မာကို ဦးတည်နေပါတယ်။ ယုံပါသလား။ သင် ယုံသင့်ပါတယ်။ အဲဒါအမှန်ပါပဲ။ များမကြာမီ သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် သင်ဘာလုပ်နေသည်နှင့် သင်မည်သူဖြစ်သည်က နောက်ဆုံးတွင် သင်အောင်မြင်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
6. အလားအလာကို နားလည်ပါစေ
အလားအလာ၏ အံ့သြဖွယ်အချက်မှာ ၎င်းသည် သူ့ဘာသာသူ အလိုလိုတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နှင်းဘောလုံးတွေ လှိမ့်နေနိုင်ရင် ရွေ့လျားမှု စွမ်းအင်တွေက လွှမ်းမိုးသွားပါလိမ့်မယ်။
သင်လေးစားတဲ့လူတွေအကြောင်း ခဏလောက်စဉ်းစားပါ။ သူတို့ကို ဘာလို့ သဘောကျတာလဲ ? ၎င်းတို့က အောင်မြင်မှုကိုသိမြင်နိုင်သော အလားအလာများ ပြည့်နှက်နေသောကြောင့် ၎င်းတို့က သင့်ကို ဆွဲဆောင်နေပါ လိမ့်မယ်။ ဒီလိုမျိုး ခွန်အားတွေ ပေးတဲ့လူတွေကို မြင်တဲ့အခါ သူတို့နဲ့ ပိုနီးစပ်လာပြီး သူတို့လုပ်နေတဲ့အရာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာ စေဖို့ တွန်းအားပေးပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်မှာ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်တွေကို တွေးတောရင်း တောင်ထိပ်မှာ ထိုင်နေမှာလား ? ဒါမှမဟုတ် သင်သွားရာလမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ အတားအဆီးတွေကို တွန်းထိုးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် တွန်းတင်မှာလား ?
7. အခွင့်အရေးကို ဆွဲဆောင်ပါ။
အခွင့်အလမ်းများနှင့် အောင်မြင်မှုများသည် သင်သေချာပေါက် လိုက်လုပ်ရမည့်အရာမဟုတ်သော်လည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိသောလူတစ်ဦးဖြစ်လာခြင်းဖြင့် သင်ကဆွဲဆောင်ထားသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အရည်အချင်းတွေကို မြှင့်တင်နိုင်ရင် သင့်ကိုယ်သင်၊ သင့်ကျန်းမာရေး၊ သင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေပါလိမ့်မယ်။ အခွင့်အလမ်းများက သင့်ကို ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
8. အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ ။
အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားပြီးတာနဲ့ မင်းမျက်လုံးတွေကို မှိတ်ထားစေတဲ့ မျက်ခွံတွေ ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ သင့်အမြင်ကို ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုသဖွယ်ကို ဖွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။
လက်လှမ်းမှီသမျှ အခွင့်အလမ်းတွေကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ် ။ ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြေခံပြောင်းလဲမှုဟာ သင်၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ပြန်မရနိုင်တဲ့အချက်ပါ။ ဒီအပြောင်းအလဲမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ သင့်ရဲ့ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
– သင့်အတွက် ဘယ်အရာမှ မဖြစ်နိုင်တာမရှိပါဘူး။
-သင့်ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော စိတ်ကန့်သတ်မှုက သင့်ရဲ့ အတွေးတွေသာဖြစ်ပြီး ယခုအခါမြန်မြန်ဆန်ဆန် ကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်။
– သင်လိုချင်သမျှကို လူအများစု မနှစ်သက်‌သောကြောင့် သင့်အပိုင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်လာပါတယ်။
– အခုဆို ဒါကိုနေရာတကာမှာ မြင်ရပါပီ။
9. ဘယ်တော့မှ ကျေနပ်မနေပါနဲ့။
သင် ပန်းတိုင်တစ်ခုရောက်ပြီးသည့်တိုင် သင်စိတ်မသာယာရပါဘူး။သင့်အတွက်က ပန်းတိုင်တောင် မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လောက်ထိ တွန်းနိုင်လဲဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ အကြောင်းရင်းပါပဲ။
ဒါက သင့်ကို ကျေးဇူးကန်းစေသလား။ လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ သင့်ဘဝရဲ့ အရာအားလုံးအတွက် နှိမ့်ချပြီး ကျေးဇူးတင်နေပါ။ မည်သည့်အခါမှ ကျေနပ်အားရမှု သို့မဟုတ် ပျင်းရိမှုကိုတော့ မဖြစ်စေပါနဲ့။
10. အခြားသူများကို တန်ဖိုးထားပါ။
ကမ်းခြေမှာ လှိုင်းတွေ ရိုက်ခတ်နေတာကို ကြည့်ပြီး ရေရဲ့ အဆုံးလို့ တွေးမိဖူးပါသလား။ သေချာပါတယ် ဒါကို ကျွန်တော်တို့ မသိနိုင်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ပင်လယ်ရေဟာ အဆုံးမရှိ ပေါများတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယူဆလိုက်ပါတယ်။ကမခြေမှာ သဲရဲတိုက်ဆောက်တဲ့ ကလေးအတွက် သဲပုံးတစ်ပုံးကို အခါခါထပ်ဖြည့်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါ ဟာ ကျယ်ပြန့်တဲ့စိတ်သ‌ဘောထားက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ ဆိုတာပါပဲ။ အခြားသူများအတွက် ချီးမွမ်းမှု၊ အသိအမှတ်ပြုမှု၊ အကြံဉာဏ်တွေ၊ အသိပညာနဲ့ ငွေကြေးတွေကို ပေးကမ်းပါ ။ သင် ပေးသော အရာများကသင့်ထံသို့ အဆတစ်ထောင် ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
11. ကြုံရမည့်အဆုံးမရှိသောဖြစ်နိုင်ချေများကို အကောင်းဆုံးအသုံးချပါ
ထူးခြားပြီး အဆုံးမဲ့သောဖြစ်နိုင်ချေများကို စူးစမ်းပါ။ သင့်ကိုယ်သင် တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းက သင့်အတွက် နုပျိုမှု၊ တက်ကြွမှုနှင့် စိတ်၏အလှကို တိုးစေသည်ကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့။